Nepal Dayari | श्रीमानले अर्कै त’रु’नि लिएर हिड्दा यता श्रीमती र छोराको बि”च’ल्ली, रु’दै मिडियामा (भिडियो हेर्नुस)
श्रीमानले अर्कै त’रु’नि लिएर हिड्दा यता श्रीमती र छोराको बि”च’ल्ली, रु’दै मिडियामा (भिडियो हेर्नुस)
फागुण ६, २०७८ शुक्रबार २८४ पटक हेरिएको
धनकुटा जिल्लाको लेगुवा घर भएर बसोबास गर्दै आएकी अन्जु थापा नाम गरेकी एक महिला आफ्नी चार बर्षको छोरोको साथमा अशोक थापा नाम गरेका श्रीमानले बिदेश जान्छु भनेर अर्कै त”रु”नी केटि भ”गा”ए”र काठमाडौं लिएर गएको र हाल सम्पर्कबिहिन रहेको बताउँदै रु”दै”रु”दै श्रीमानको खोजी गर्दै सहयोगको अपेक्षाका साथ मिडियामा आएकीछिन । श्रीमानकै लागि भनेर आफ्नो घरपरिवार सर्वस्व सबै त्या”गे”र भा”गे”र आएको तर आज आफ्नै श्रीमानले धो”का दिएको उनको गु”ना”सो रहेको छ ।
श्रीमानले अर्कै केटि लिएर हिडेको अस्ति पौषमा एक बर्ष भएको उनले बताइन । क”ठै नि”कै पि”डामा छिन उनि, अन्तरबार्ता भरी नै रुइन उनी । श्रीमानको उक्त महिलासँग ह”ल्ला भने चलिरहेको तर यसरी लिएर नै जानुहुन्छ भन्ने कुरामा आफुलाई बिश्वास नभएको उनी बताउँछिन । बिदेश गएका श्रीमान बिदेशबाट आएपछि घरमा एक हप्तामात्र बसेको र काठमाडौं गएर दुईचार पैसा कमाउने भन्दै हिडेका श्रीमानले आज यस्तो गरेको बताउँदै रु”न्छिन उनी ।
कमाउन जान पनि दिन्नस भने आफैं जा कमाउन भनेर श्रीमानले स”न्केका कुरा गरेको उनी बताउँछिन । त्यतीबेलादेखि हिडेका श्रीमान अहिलेसम्म घर पनि नफर्केको र फोन गर्दा पनि सम्पर्क नम्बर ब्ल”क लिस्टमा राखिदिएको उनी बताउँछिन । फोनमा बोलेको समयमा पनि राम्रोसँग नबोल्ने गरेको र उक्त महिलालाई घरैमा ल्याउनु भन्दा समेत श्रीमानले नमानेको उनको भनाई छ । घरखर्च पठाइदिनुभन्दा खेतबारी छोडिदिएर गएको र आफै गरेर खानु भनेर उल्टो आदेश दिएको बताउँछिन उनी ।
कतिसम्म निर्दयी त उनी श्रीमतीलाई छोरो आफूलाई दे समेत भनेछ्न उनले । यता श्रीमती भने आफूले छोरोलाई खाईनखाई गरेर हुर्काएको र श्रीमानले आफ्नो छोरोलाई एकजोर कपडा पनि नदिएको बताउँदै भा”वु”क बनिन उनी । छोराले बाबुको वारेमा सोध्दा आफुसँग छोरोलाई दिने जवाफ नै नरहेको बताउँछिन उनी । अरुको बाबा आएको देख्दा छोरोले पनि बाबू खोज्ने बताउँदै रु”न्छि”न उनी । दिनरात दु”ख गरेर त”ड्”पि”त”ड्”पि बाँचिरहेको बताउँछिन उनी ।
क”ठै ब”रा ! छोरी मान्छेल गर्ने काम त छँदै छ छोरा मान्छेले गर्ने काम समेत गर्नुपरेको बताउँछिन उनी । आफूले कोदालो ख”न्नेदेखि लिएर हलो जो”त्ने कामसमेत गरेर जसोतसो जिबिका चलाइरहेको बताउँछीन उनी । न श्रीमानको साथ, न घरपरिवार न त माइतीको नै ए”क्लि भएकीछिन उनी । उनले भा”गे”र बिबाह गरेकोले माइतीपक्षबाट पनि सपोर्ट नमिलेको उनी बताउँछिन । म के गरौ अब मेरो जाने ठाउँ नै कहाँ छ र ? भन्दै रु”न्छि”न उनी ।
थप जानकारिको लागि हेर्नुस भिडियो